ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရခြင်း နှစ်လပြည့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်
The Voice Weekly's Photos & News
လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းများ ဖြိုခွင်းခံရခြင်း နှစ်လပြည့်မြောက်သည့် ယနေ့ ဇန်နဝါရီလ၂၉ ရက်နေ့တွင် စီမံကိန်း ဒေသခံ ပြည်သူများက မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီရှေ့ ရှိ ပုသိမ်-မုံရွာ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ရာ လက်ပံတောင်းတောင်စီမံကိန်း ဖျက်သိမ်းရေး၊ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ပြန်ထားမှုအား ပယ်ဖျက်ပေးရေး၊ ပြည်သူများ၏ နစ်နာချက် လွှတ်တော်က အမြန်ဆောင်ရွက်၊ သပိတ်စခန်း ဖြိုခွင်းမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများအား အမြန်ဆုံး အရေးယူပေးရေးနှင့် လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဆောင်ရွက်သူများအား ဖမ်းဆီးထားမှုများ ချက်ချင်းလွှတ် စသည့် အချက် ၅ ချက်အား တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ယင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သူတဦးက ပြောကြားသည်။
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 8:08 PM
boburmese.blogspot.com - မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၂၉ -၂၀၁၃)
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာသံဃ အစည်းအဝေးခေါ်ပြီး မဟန
အဖွဲ.ကိုပြန်ဖွဲ.သင်.ပါတယ်၊ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး ခောတ်နဲ.
အညီပြန်ဖွဲ.သလိုပေါ. ၊ ဒီမိုကရေစီခောတ်ကာလမှာ သံဃာထုအများစု သဘောတူသူသာ မဟန အဖွဲ.၀င်တွေ
ဖြစ်သင်.ပါတယ် ၊ဥပမာ ၀ါတော် အနည်းဆုံး ၂၀ နှစ်ရှိရမယ်
စသည် သတ်မှတ်ပြီး ပြန်ရွေးသင်.ပါတယ်၊
ယခင် မဟန ၀င်ဆရာတော်တွေ ကို မကောင်းဘူး လို.ဆို
လို တာမဟုတ်ပါ ၊ ဒါပေမယ်. ၅ နှစ် ၁ ကြိမ် တော. ရွေးခြယ်ပွဲ ပြန်လုပ်ပြီး
Change သင်.ပါတယ်၊ ရာထူး ဆိုတာ ယစ်မူး တတ် ၊
တွယ်တာတတ်တဲ. သဘောရှိ လို.ပါ ။
ဖေါက်ပြန်တတ်တဲ. မနော ရဲ. သဘာဝကို ဆရာတော်
ကြီးများ တရားဓမ္မ နဲ. ရှု ပြီး ဒီမိုကရေစီကျင်.စဉ်နဲ.အညီ
စီမံဆောင် ရွက်ကြပါရန် ဦးတင် လျှောက်ထားအပ်ပါ